Zavakanto & Kolontsaina · Aogositra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Aogositra, 2009
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Aogositra, 2009
Palestina: Kolontsainan'ny fanoherana any Gaza
Palestina 30 Aogositra 2009
Nivoaka voalohany tany Gaza tamin'ny 1 Aogositra ny horonantsary lava novokarin'i Hamas, ampahany amin'ny tetika fanangonana fanohanana nataon'ilay hetsika avy amin'ny alalan'ny hetsika ara-kolotsaina, tamin'ny fananganana “kolontsainan'ny fanoherana“. Tamin'iny herinandro iny ihany, nisy lalao momba ny famokarana horonantsary nisokatra tany Gaza. Samy natrehan'ireo mpitoraka blaogy avokoa izy roa ireo, ary omeny antsika ny hevitr'izy ireo.
Bolivia: Fetin'i St Roch ho fanomezam-boninahitra ny alika
Amerika Latina 18 Aogositra 2009
Isaky ny 16 Aogositra no hankalazan'ny Boliviana ny fetin'ny St Roch (na San Roque amin'ny teny Espaniola), izay olo-masina mpiaro ny alika. Mety ho tsy dia malaza manerana ny firenena ny tantaran'ity olo-masina Frantsay ity, saingy manararaotra ihany ny Boliviana hanome fotoana manokana ny biby fiompiny ao an-trano. Mety ho...
Uruguay: CIP, Vohikala ho an’ireo horonantsary sy ireo sarimihetsika fohy
Amerika Latina 14 Aogositra 2009
Antsoin-dry zareo hoe fomba iray hafa hamoahana ireo video vokariny izy ity mba tsy hifaninanany amin’ireny video novokarina tany an-trano ho fankalazana tsingerintaona ireny, ireo videoan-tsaka ary ireo horonantsarin-kira ho an’ny karaoke. Tanora roa avy any Uruguay no nanapa-kevitra hanova ny zava-misy ka namorona ny Cip, vohikala natokana hanehoana ny sarimihetsika novokarin'ireo mpamokatra horonantsary mahaleontena, izay afaka maka ny sarimihetsika nataon-dry zareo avy any amin’ny toeran-drakitra any ary mizara izany amina fiaraha-monina midadasika kokoa
Put it On: Fifaninanana ho an’ireo mpamokatra sarimihetsika
Media sy Fanoratan-gazety 13 Aogositra 2009
Ny fifaninanana Put It On Picture Show dia mety hahazoana vatsim-pianaranana hianatra any amin’ny New York Film Academy ary ihany koa loka mitentina 5000 dollars amerikanina, ho an’ny court métrage tsara indrindra, na ho an’ny long métrage tsara indrindra, ary koa ho an’ny mpaneho an-tsehatra [interpretation ] mendrika indrindra [Andoavambola ity andiany ity]
Myanmar(Birmana): Bodista tafintohina tamina sarina mpilalao sarimihetsika
Myanmar (Birmania) 11 Aogositra 2009
Sary iray manafintohina ahitana mpilalao sarimihetsika iray miaraka amin'ny namany miankanjo rebareba saffron no nisy nametraka tao amina blaogy birmana malaza iray, nampisafoaka ny fiombonamben' ireo mpitoraka blaogy birmana. Tan, mpanoratra ao amin'ny GV no nandika ity lahatsoratra ity avy tamina blaogy Birmana.
Ekoatora: Ny fahalasanan'ilay mpanoratra Jorge Enrique Adoum
Amerika Latina 10 Aogositra 2009
Mitomany ny fahalasanan'i Jorge Enrique Adoum ireo Ekoatorianina, izay nolazain'i Pablo Neruda nahazo ny loka Nobel indray fa "ny ngezalahy amin'ireo poety any Amerika Latina." Maro ny mpitoraka blaogy miombon-kevitra amin'izany, indrindra fa nanolotra fahatsiarovana manokana an'i "Jorgenrique," izay nanampy tamin'ny fametrahana mari-pamantarana ny asa fanoratana teo amin'ny firenena, ireo mpitoraka blaogy ireo, niaraka tamin'ireo mpanoratra sy mpanakanto hafa.
Firenena Mikambana: fifaninanana horonantsary ho an'ny olona 9-25 taona momba ny fifindra-monina
Eoropa Afovoany & Atsinanana 04 Aogositra 2009
Mikarakara ny fifaninanana horonantsary Plural+ momba ny fananganana fiaraha-monina mandray andraikitra sy mahay mifandefitra kokoa ny 'Vovonana momba ny sivilizasiona ao amin'ny Firenena Mikambana [United Nations Alliance of Civilizations]'. Misokatra ho an'ireo mpandray anjara rehetra eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 25 taona hatramin'ny 30 Septambra io fifaninanana io